Kufamba kubva kuUbuntu kuenda kuDebian | Linux Vakapindwa muropa
Handizvione semushandisi wemberi kana wehunyanzvi zvachose, handitomboshandisa PC yangu kusevha, kutaura, kugadzira zvinyorwa, kuteerera mimhanzi uye dzimwe nguva kutamba mitambo. Nguva refu yapfuura Ini ndanga ndichida kuyedza Debian, iyo distro yemazhinji linuxeros, amai veUbuntu uye yakajairwa den yeyekushingirira linuxists. Zvino Ndinokutaurira ruzivo rwanguKana iwe ukashandisa Ubuntu uye hauna kumbobvira wabvapo kana iwe kuyedza vamwe uye iwe hauna kuvafarira, iwe uchave unofarira kuziva kuti Debian ndeyei kune mushandisi musikana mudiki Ubuntu senge iwe kana ini.
Chii chinonzi Debian?
Ini handisi kuzoita iyo biography, kana iwe uchifarira nhoroondo yezvakaitika enda kuWikipedia. Asi ngatitii iyo Debian inoshanda sisitimu yakajairika Linux distro, sezvandataura pamusoro apa ndi "mai veUbuntu" sezvo yekupedzisira ichivakirwa pairi. Iyo ndeimwe yeanoremekedzwa Mahara Software mapurojekiti uye mairi zvinoita kwandiri (sekuona kweziso reshiri) kuti vanhu vazhinji vanoshanda.
Zvinowanzo taurwa kuti idistro, ini handizive kana zvakaoma, asi kuti haisi distro yeva newbies, ngatisiyei ipapo. Ichokwadi ndechekuti haisi yakaoma distro yekushandisa, asi kuisirwa kwayo kwakasiyana nekuiswa kweUbuntu uye kunyangwe kubva kuWindows imwe.
- Iyo haina Live CD (iwe unopinda mukati mekuisa)
- Kuisa nekumisikidza chete base base system, vazhinji vanoiisa seizvi, saka vanowana "nhema skrini" pavanopedza kuisirwa uye kwavanotanga kunyatsogadzirisa iro rese basa.
- Nokusingaperi, maitiro acho anoitwawo pane chinyorwa chinyorwa (ndokuti, kwete graphic, ndokuti zvakashata)
Mune yangu nyaya zvandakaita zvinotevera:
Munguva yakapfuura (uye chimwe chezvinhu chakaita kuti ndifare) ini ndaida kuiisa ine 64-bit vhezheni, nekuti processor yangu iri 64-bit. Nechimwe chikonzero panguva iyoyo ini ndakachiisa uye handina kukwanisa kupinza giraidhi yakajeka mairi. Mwedzi yakati gare gare, ndiko kuti, vhiki kana kupfuura yapfuura ndakaisa Debian neyakajairwa 32-bit disk (debian-etch) uye ndikazadzisa basa rangu, handizive kana kwaive kusagona kwangu kana kuti ndaitofanira kuona zvivakwa, asi chokwadi ndechekuti izvozvi ndaigona uye ndisati ndambo.
Chiitiko changu chekuisa Debian
Sezvandanga ndichitaura, Debian inoisa nekumisikidza kuburikidza nechinyorwa chinyorwa, asi isu tinogona kuchichinjira kune chakajeka kana tikanyora rairo »
»Pakutanga kubhidha CD. Nenzira, iwe unogona kutora iyo Debian disk pa www.vedani.org/CD/, Disc 1 yakaringana iwe uye kana iwe ukairodha pasi kuburikidza neTorrent zviri nyore kwazvo.
Tevedza nhanho dziri paCD, kupatsanura zvine hungwaru (sarudzo idzo dzakafanana kana dzakafanana chaizvo neidzo dzeUbuntu mu »
»Zvirinani) uye gadza. Debian inokupa iwe mukana wekuisa pamusoro peInternet, asi zvinofanirwa kutaurwa kuti kana iyo router ikasabatana neADSL hapana dzimwe nzira dzakawanda dzekuimisa panguva yekumisikidza. Ndinokurudzira kuisa zvese kubva paCD, hapana chinoshaikwa, zvakare iyo Zyxel router yandinoshandisa haishande neDHCP, saka kana ikakubvunza nezve magirazi enetiweki, kana izvo zvikaitika, zviudze kwete.
Chimwe chinhu chaindinetsa kana ndichiisa chaive kusaziva maitiro ekugadzirisa mamiriro ekunze kana kuve nekuwedzera icho mushure mekuisa iyo yese inoshanda sisitimu. Uye ndakanga ndisina kururama, iwe unogona. Pane sarudzo (mumenu yekumisikidza) yekuwedzera zvinhu zvakasiyana ku "base installation" uye yekutanga inoonekwa "Desktop Nharaunda". Iyo sarudzo ndeye otomatiki uye iwe wedzera GNOME. Kana iwe usingaifarire, ipapo uchafanirwa kusarudza chete hwaro hwekumisikidza uye nyora mirairo kubva kunyaradzo.
Iine system yatove kuiswa
Kana uchitangazve sisitimu, Debian yatotanga neiyo graphical server (uye kana zvisiri, iwe unogona kugara uchiita
) negadziriro yeVESA, saka kunyangwe dai ndisina iyo "yekutenderera cube" ine nvidia, yakave nechokwadi chekuti PC yakatanga zvakanaka.
Pandakazviona ndiri mukati meDebian, ndaive nemanzwiro akasarudzika ekuziva (nekuti ini ndinogara ndichishandisa GNOME uye ndinorangarira Ubuntu mairi). Kuti uzo gadzira ADSL Ini ndaifanirwa kuisa nemaoko "pppoeconf" uye panguva iyoyo ndakaona kuti ndakanga ndisina SUDO. Ini handina kuiisa nekukasira, gare gare Ini ndaifanira kudzidza kuigadzira uye ipapo ndakaiisa.
NeInternet, iwe unoziva, zvinhu zvinochinja uye ipapo ini ndakatanga kunzwa zviri nani uye kunyatsogadzikana. Iyo Debian browser «iceweasel»Zvakafanana neFirefox, saka pakanga pasina zvinoshamisira kugadzirisa matambudziko uye zvishoma nezvishoma ndakatanga kusiya zvese zviri panzvimbo. Ndakagadzirisa zvinyorwa kuti ndikwanise kurodha zvirongwa kubva paInternet uye kwete chete kubva kuCD. Ikoko ndakaona kuti iyo distro haina kunyanya kukosha: ini ndaigona kuisa neSynaptic isina zvisungo Flash 9 uye nharaunda yeJava (Ini ndakanga ndisina kana nharaunda yeJava muUbuntu). Zvisinei, kuisa vatyairi venvidia madhiraivha zvaisakwanisika, kana kuti, kwete hafu. Ini ndakakwanisa kuiisa neSynaptic asi kwete kuti iite pasina zvikanganiso, saka handina "spinning cube", ikozvino VESA.
Zvinokosha: ruzivo rwangu rwakaratidzirwa mumapoinzi tiivistelmä
Chinhu chakanaka pamusoro paDebian
- Izvo zvaive zvisina kunyanyooma kumisikidza ne "installgui"
- Ini ndaigona kuiisa ndisina Internet
- Yakandipa mukana wekuisa graphical nharaunda nekukasira
- Kuti yakagadzikana ndeyechokwadi, kuti chengetedzo inogona kunzwika
- Izvo hazvitsamire paInternet, kutaura zvazviri, ma disc anogona kuponeswa uye oshandiswa senzvimbo dzekuchengetedza (pane maDVD matatu)
- Kune vanodya vanofarira, Debian haisi kambani.
Chinhu chakashata pamusoro paDebian
- Zviri basic Kana yaiswa, haina kuunza zvese izvo Ubuntu zvainazvo kana uchiisa, kana iwe uchida OpenOffice iwe unofanirwa kurodha pasi, kunyangwe izvi zvisina kunyatsonaka asi mamwe maumbero anogona kunge achivhunduka asina zvese zviripo (zvakafanana nematurusi madiki senge SUDO kana PPPOECONF).
- Pane zvishoma vabatsiri, kunyatso kutaura, ini handina kuona chero, semuenzaniso pazvinhu zvakaita sekutyaira zvivakwa (enzanisa huwandu hwezvinhu muUbuntu Desktop Menyu neDebian Desktop Menyu)
- Kuisirwa pasina kuoma zvishoma kuvhiringidzika, zvishoma.
- Ini ndichiri kusakwanisa kumisikidza nvidia zvakavanzika paDebian, ini ndichine VESA uye ndisina Compiz Fusion
- Pane zvakawanda zvakashata zvataurwa nezve toni yeiyo Debian forum nhengo kuti kubvunza chimwe chinhu kunotyisa kupfuura blogger iyo "menéame mafia."
- akakodzera iri gadziriro yekumisikidza yakakura, sehunteros tinoiziva.
- Debian, kune ese ari pamusoro anotaridzika zvakanyanya seUbuntu asi hausi Ubuntu.
Kubva pane zvataurwa pamusoro apa ini ndasara nehuremu hwakanaka, muchokwadi ini ndinonyora ino chinyorwa naDebian uye Handina kudzokera kuUbuntu kubvira pandakaisa Debian Uye kwete nekuti ndinozvidza, asi nekuti vanoita mabasa nenzira imwechete uye Debian haandipe matambudziko, ini ndiri munhu wekuchinja maitiro asi maitiro pakupedzisira (ndatorawo vhiki).
Ndine urombo nekureba kwechinyorwa, asi dai ndisina, zvingadai zvisingaite kuti ndikutaurire maitiro andakaita zvandakaita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Kubva Kubuntu kusvika kuDebian
Ndiwe kubva kuna debian ecth kumberi munguva yekumisikidza yawakaisa: installgui wobva wapinda
uye saka iwe unotove uine graphical
unogona kugadzirisa kadhi nekuisa iyo nvidia PureDriver nemubatsiri wemoduli
PS komendi yapfuura yaive ye ... aiwa, ndakanga ndisati ndapedza kuverenga iyo yekupinda
Edza kuisa vatyairi veNvidia seizvi:
Dhawunirodha mutyairi kubva pano: http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
Ipapo iwe unofanirwa kumisikidza yako kernel misoro uye anodiwa mapurogiramu ekunyora iyo kernel module: aptitude yekuisa linux-misoro- `uname -r` kuvaka-yakakosha gcc
Wobva wadzvanya CTRL + ALT + F1 uye pinda mukati semudzi
Misa iyo gdm daemon: /etc/init.d/gdm mira
Iwe unopa mvumo yekuuraya kune iyo inosimudza ne chmod + x /path/del/driver.run uye iwe unoitisa
Iwe unoteedzera nhanho dzichiti usatarise iyo yakamisikidzwa module pane iyo nvidia peji uye kumagumo utaure kana ichigadzirisa iyo xorg.conf (inoita backup)
Chekupedzisira, ingoisa gdm uye dzokera kune inoenzanisira nharaunda, kana iwe uchida kuziva kana iwe uine iyo yekumhanyisa inoshanda nemazvo: aptitude gadza mesa-zvishandiso wobva wamhanya glxinfo | grep "kunanga" kana ichiti hongu, une 3d kumhanyisa
Pindura kuti lopez
Handina chandinopesana nevanhu vanoshandisa Debian. Ini ndinofunga kuti Debian ndeye pro pro Ubuntu kana zvinopesana, kuti Ubuntu ndiDebian yemadhamu. Ini ndinodawo kuziva, asi ini ndichaedza kuiisa kana ndiine lap rangu nyowani.
Kune mutyairi weNvidia uye zvakadaro, mu esdebian wiki unogona kuwana zvinhu zvakawanda, uye zvakare kutsvaga foramu.
Ini handizive kuti nei maDebianite foreros aine mukurumbira wekudya zvidya ... chinhu chete chinoitika ndechekuti isu hatipe hove, tinodzidzisa kuredza: D
Zvakanaka, ini handina kana kumhanyisa iyo "installgui", muLenny kumisikidza kwaive graphical otomatiki. Ndakazviita netinstall kubva kuUSB (ini ndaisungirwa nekuti ini handina CD muverengi, ine UNetBootin, hapana mirairo) uye yakazvisarudzira yakasarudzika «laptop kuona» «base system» uye «desktop nharaunda» ... zvakanaka, hapana senge Ini hapana chimwe chinhu chandaida, ku next. Pamakumbo ekare ini ndakaisa Etch uye chii chaunoda kuti ndikuudze, iko kuiswa mune zvinyorwa modhi hongu, saka chii? Izvo zvakafanana neiyo fluxbuntu, iyo ubuntu isina unofficial fluxbox, ini ndaifanira kumisikidza iyo network nemaoko (mune zvese zviri zviviri, mu fluxbuntu zvaive zvisiri nyore nekuti yaive ubuntu) asi neine jira rinobatsira uko zvese ruzivo rwe router yangu rwakauya, hapana Yeimwe nyika. Vesa uye pasina bhaketi rinotenderera, ndinaro saizvozvo, ndinofara, handidi zvimwe;). Sudo ... uf ini handisati ndaziva kana zvakachengeteka kushandisa Sudo kana mudzi: S. Flash Swfdec yakauya nekumira, ini ndaisatombo fanirwa kuiisa.
Uye chii chaunoda kuti ndikuudze, ini ndinonyatsofunga kuti kana iwe ukapinda mune akanyatsogadziriswa marongero, kunyangwe iyo iri nyore distro, inogona kuve yakaoma. Uye kuti ndiite zvandinoita, wobva wawana iyo pfungwa yekuti ini ndakapesana zvakakwana neanobira (kwete, anotsemura kana) uye kuti ndinogara ndichitsvaga zvinoita sezviri nyore kwandiri.
Offtopic: ndokumbirawo usandibvunze kuti kuisirwa Vista kwangu kwekupedzisira kwakafamba sei: S.
Ndinokukorokotedza nekuita kwako kusvetukira kunaDebian, sezvo iwe uchiona kuti hazvina kuoma kudzidza kuishandisa.
Kana ndisina kuverenga zvisizvo, iwe unoti hauna kusarudza network replica, nekuti kwandiri zvinoita sezviri nyore kurodha netiweki, nekuti nenzira iyoyo unotova nezvose zviri kushanda panguva imwe chete, ingave gnome kana kde, ipapo iwe inogona kugadzirisa, kuwedzera uye kubvisa zvirongwa kubva mukunakidzwa.
Chero mibvunzo isu tiri kubasa rako :)
LJ Marín, ndinofunga kuti netinstall une gnome kana gnome, hauna kde, kunze kwekunge iwe uchinge waiisa gare gare kana kungoisa sist. base uye wedzera iyo.
Ndinokutendai mose nezano ramakandipa kusvika parizvino:
@lopez: Ndatenda neruzivo, asi maitiro acho anotaridzika kunge akaomesesa?
@ LJMarín: Ini handina kusarudza "network replication" nekuti (ndazvitaura muchinyorwa) yangu router haina kubatana neInternet, yaisakwanisa. Zvisinei, CD 1 ine mabhesiki ekuisa uye kana, sekutaura kwa @ laura077, hazviite kuisa kde kana chimwe chinhu, ini handisi kuwana mutsauko.
Makorokoto Fran !!!
Hi Laura, pamwe netinstall kana iwe uine mukana wekuisa gnome, kde kana kunyange xfce.
Paunorodha cd, ipapo kwaunoti masosi ekuti installgui akanyora iwe unogona kuisa iyo Desktop yekuisa, seizvi:
installgui mabasa = »kde-desktop, standard»
nenzira iyi unozotora kde kana ukasarudza network replica, uye ingochinja "kde" kana iwe uchida xfce, nekuti kana iwe usingaise chero chinhu sezvawataura nekumisikidza gnome.
masosi handina kunge ndarangarira kuti iwe wataura nezve rauta hehe, zvakanaka ini ndinoona zvese uye ndosaka ndanga ndisina matambudziko, ndakangozvitaura nekuti kune mumwe munhu kekutanga zviri nyore kupinda mu graphical mode pane kutanga kuyedza kubva pamutsetse wekuraira uye nekuisa zvese kumunwe, ini handizive, ndinoti: P
Kwayedza, ini ndinofunga mutsauko ndewekuti CD1, 2 .. yakachengeteka kupfuura netinstall, kunyanya kana iwe uchiibatanidza kune network kune replica, sezvo iwe wakazvibatanidza kwenguva yakareba (mune yangu yaive 4h) usina akavanzika iptables (kana yako yekumberi) kutanga. Ndakazviita sezvizvi nekuti ndakanga ndisina imwe sarudzo: S
LJ Marin KDE Fan inokupa chiuru chekutendassssssss !!!!
Ndiri kutarisira kuchinjira kuDebian asi ndave kuda kuenda kuzororo;), pamwe ndinofara munzira yekudzoka
@ffuentes kana iwe usingakwanise kuzviita kuburikidza nemaneja wepakeji zviite seizvi, ndozvandiinazvo uye handina dambudziko, inongova matanho mashanu zvakadaro: S
Ini ndichaita mamwe ma "Bad Debian"
- Izvo zvakakosha kana yaiswa,
Ini handione chero chakaipa, chakanyanya kukwana, nekuti haisi kuisa zvinhu zvandisingade, asi izvo zvandinoda.
- Kune vashoma vabatsiri, zvichinyatso kutaura
Chinhu chakavakirwa parusununguko hachifanirwe kunge chakavakirwa kune vatyairi vezvivakwa, zvishoma zvavanodiwa zviri nani.
Debian haina kutaridzika seUbuntu. Ubuntu inotaridzika saDebian
Chinhu che "installgui" hachinyanyo kudikanwa kana Lenny akaiswa, izvo zvinokurudzirwa kupfuura etch, chinhu chega chekuti bvunzo iyi ndiyo inosimudza.
Iyo "kutya kubvunza" chinhu ingoenda kune yakasarudzika IRC chat chat munyika yako uye ubvunze kana zvimwe mu # debian-es kana pane iyo esDebian saiti.
Chinhu chandakawana uye chandakafarira: D
Geek nemasikirwo, Linux nesarudzo, Debian hongu.
@ffuentes Ndatenda zvikuru
@lopez ndave kuzoyedza, ndezvekuti chakakanganisika yaive xorg.conf, ndizvozvo, pandakaisa iyo nvidia-glx-nyowani neiyo xorg shanduko haina kushanda uye ndaifanirwa kusevha yekare xorg .conf.
Muchokwadi, kuti umise, hazvidikanwe kurodha pasi yekutanga 700 MB cd, chinhu chiri nyore kwazvo kurodha pasi 150 MB netinstall mufananidzo waunongotora wega wekutanga weconsole oparesheni, kubva ipapo unofanirwa kugadzirisa repositori ne ruoko uye gadza iyo graphical nharaunda munguva pfupi yapfuura, izvi zvinokutendera kuti uchengetedze pamapakeji uye kwete kurodha pasi kana kuve nezvinhu zvisina basa sezvingave kwandiri post maneja kana chirongwa chekunyora manotsi
debian iri nyore kushandisa, ndakaita kuiswa kwangu kwekutanga mushure mekushandisa Ubuntu kwemwedzi mishoma uye ndanga ndichitya kufa asi mushure mekuzviwana kwekutanga kuedza ndinofanira kubvuma zvechokwadi kuti chinhu chinokudzwa kuva naDebian, zvinoenda zvakanyanya inokurumidza kupfuura Ubuntu uye ine mapakeji mazhinji (pachokwadi ndiyo ine mapakeji mazhinji). Asi, kana ndakatambura ndichiedza kuisa Slackware kana ArchLinux (ini handina kubudirira mune chero zvodii), uye svondo rino ndakaedza kushandisa OpenSuSE, Fedora, Linux Mint uye vese vakaita kunge vashoma mushure mekushandisa Debian mushure mezvakawanda kupfuura gore :)
Ini ndinokurudzira munhu wese kuyedza Debian, pane zvakazara zvinyorwa uye zviri nyore kushandisa kunyangwe iwe usingazvitende hehe
Kwaziso uye kufara gore idzva!
Ini ndinobvumirana newe zvakanyanya uye ndinozvibvumira kudzikisira chokwadi chekuti yakagadzika vhezheni yeDebian etch (yazvino) uye ndeyekuti… INOGADZIRA futi… nechikonzero chimwe chete icho chinoitwa pamaseva.
Ini ndinokurudzira kuti iwe utamire kune lenny, kungave nekudzoreredza kuisirwa kana kukwidziridzwa kubva kuecch nekushandura zvinyorwa kubva "zvakadzikama" kuenda ku "kuyedza", zvichave nyore kwauri kuti uise mutyairi wepfuma yeNVIDIA yako.
Kana kuiswa kwapera, iwe unofanirwa kuisa gnome nenzira inotevera, kuti urege kuisa zvinhu zvausingazogari.
"Kukwanisa kuisa gnome-core" iyo ichaita yekumisikidza yekumisikidza, saka kana iwe uchida kutamira kune KDE, wedzera iyo 4.x repos
Kana uchida, tumira matambudziko aunosangana nawo uye isu tichaedza kukubatsira (zvinoita kunge foramu)
Chinja iyo xD icon
Ndakaedza debian kwenguva yakakwana. Uye zvakafamba zvakanaka kwazvo. Ndinoziva kuti vanopfuura mumwe chete vachazondirova pane zvandichakuudza. Asi iro fucking bere shit kubva kuacweweel rakaputsa kushivirira kwangu. Saka ndakazviisa parutivi kungoti bhebhi rinotyisa. Ndinoziva kuti ndiyo yakajairwa firefox pachayo, asi kuona iyo bere rakarembera kubva padiki puraneti kwakaita kuti bvudzi rangu rimire. Zvese zvisizvo. Saka rega kushandisa debian. Izvo zvakafanana nekuparadzira kukuru. Ndinoifarira zvakanyanya kupfuura Ubuntu. Zvisinei, nyaya yekuravira.
Debian ndeyevasikana vadiki ... iwe unoda chimwe chinhu chinonakidza, edza LFS kana gentoo kana zvisiri.
Kana pamwe netBSD
Makorokoto ffuente nekusvetuka kukuru, hehe… ndinopfuura izvozvi.
uye ndanga ndisingazive kuti zita rako nderekuti: P
- Ndiri kuchinjira kuDebian. Ubuntu 11.04 kukundikana, ine bhagi iyo isingatsigire nvidia mabhodhi pamberi peSystem 6 (tsvaga uone. Murombo wangu Geforce FX 5500.
- Iyo imwechete Ubuntu yaigara iri musoro.
- Anenge vhiki yega yega ini ndaipedza kusvika kumahora matanhatu neFURIA ndichigadzirisa (dzimwe nguva ndichingoedza kana iyo buganda riri ganda nenyama neOS) iwo mabhugi akaisirwa nevamiririri vemaitiro kubva munharaunda iyoyo yeungochani iyo inobatsira iwe hongu, ichiti iwe fomati uye isa zvakare pavanenge vasingazive iko kukanganisa (vasina kana kuzvitaura), ndiko kuti, kazhinji nguva dzose, vanofunga kuti mumwe anozovabvunza kuti vangachinje sei Wallpaper. Ivo hapana chimwe kunze kwemavharo mashoma anopindura zvavanoda, kutora mukana nekusaziva kwevamwe vashandisi neiyi sisitimu inoshanda uye kuvaita kuti vatambise nguva yavo yakakosha (ini ndinojekesa kuti 6/1 inopindura nenzira kwayo uye ine hushamwari, yakasara ikopi uye namatidza usingaone kugoverwa kana vhezheni kunoenderana uye kana ichinyatso kushandiswa kana kwete kune uyo anobvunza).
- Imwe chete muzvina inogadziridza zvakakanganisa hurongwa, zvaive zvisingatsungike, mumwe anotarisa kudzikama uye haamboziva zvekutarisira kana uchivandudza Ubuntu.
- Ichokwadi kuti software yemidziyo iri nani, zvine mutsindo zviri nyore kutengesa tekinoroji usati waita hupenzi hukuru hweku'pa 'iyo kusunungura software (nerombo rakanaka izvi hazvingamboitika, kunze kwekunge mugadziri ari bhirionari).
- Kudzokera kuUbuntu nyaya, ivo vari kunyura mumatope, vari kutadza zvakanyanya, sezvazvakaita mune yemahara NVIDIA mutyairi 'nouveau' (ANONYANYA KUZIVA UYE ASINA 3D RUTSIGIRO RUSINGATSIGIRA MAPATA ANOTANGIRA KUSHURE KUNYANYA 6 UYE IYO BHUKU REMAHARA NEKUTI GANDA RINO NENYAMA NEZVINHU ZVINOGONA KUTI VADZIDZISI HAVACHENGETE KUZVIKUDZIRA SEZVAKAITWA ZVAKAITWA PAMASHURE PAMWE CHETE NEKUTI HAZVIITIKI).
Priya C. akadaro
Kana paine Debian live-CD:
Pindura Priya C
NDINODA KUTAMIRA MUBHUNTU SYSTEM KU DEBIAN NDISINA KUDZIVISA MABHUKU EBASA .. NDINGAITE SEI?